နေ့များ: ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရေးလမ်းကြောင်း (သို့) တိန့်ရှောင်ဖိန်၏ တောင်ပိုင်းတခွင်လှည့်လည်စဉ်
Posted by KZကေ at 12:15
T2A November 14, 2011 at 4:39 PM
ခြုံငုံသုံးသပ်ရရင်တော့ အတွေးအခေါ်ဟောင်းနဲ. အတွေးအခေါ်သစ်တို.ရဲ. တိုက်ပွဲပဲဗျ ။ အဲဒီအချိန်ကာလတုန်းက တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီရဲ. ပေါ်လစ်ဗျူရိုထဲမှာ ရှေးရိုးစွဲတွေရဲ. အင်အားကလည်း မသေးဘူး ။ ပါတီအတွင်းရေးမှုးတွေတောင် တစ်ခုခုကို လမ်းကြောင်းတင်ချင်ရင် သူတို.ကို အရင်ဆုံးနားဝင်အောင်ကြိုးစားခဲ့ကြရတယ် ။ အထူးသဖြင့် “ပါတီဝါရင့်ကြီးများ”ဆိုတဲ့ အုပ်စုပေါ့ ။ သူတို.က လုံးဝရှေးရိုးစွဲတွေ ။ သူတို.ရဲ. လုပ်နည်းလုပ်ဟန်တွေကလည်း ဟိုး…….ယဉ်ကျေးမှုတော်လှန်ရေးကာလတုန်းက ပုံစံမျိုးတွေဗျ ။ အလွန်အကျွံတွေလုပ်ရမှ ကျေနပ်ကြတယ်။
ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရေးကို အထိခိုက်မခံရအောင် ၊ လမ်းကြောင်းချော်ထွက်မသွားအောင်
မနည်းထိန်းနေရတာက သူတို.ကြောင့်ဗျ ။ သူတို.က အဲဒါကို သိပ်ပြီးယုံကြတာမဟုတ်ဖူး ။
မော်စီတုန်းကွယ်လွန်သွားပြီးနောက်ပိုင်း ဆင်နွှဲခဲ့တဲ့ တော်လှန်ရေးတွေမှာလည်း အဲဒီလက်ဝဲစွန်းသမားတွေက အခွင့်အရေးယူအမြတ်ထုတ်ပြီး ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရေးကို ဖျက်လိုဖျက်ဆီးမလုပ်အောင် မနည်းကာကွယ်ခဲ့ကြရတယ် ။ အထူးသဖြင့်တော့ ၁၉၈၀+ ခုနှစ်တွေအတွင်းမှာပေါ့ ။ ဥပမာတစ်ခုကိုပြောရရင် - ၁၉၈၇ခုနှစ်မှာ လုပ်ခဲ့တဲ့ Anti-liberalization campaign မှာဆိုရင် အဲဒီအချိန်က ပါတီအတွင်းရေးမှုးဖြစ်တဲ့ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရေးသမား ကျောက်ကျိယန်ဆိုရင် အဲဒီအုပ်စုတွေက ပွဲလန်.တုန်းဖျာဝင်ခင်းပြီး ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရေးကို ရပ်သွားအောင်လုပ်မှာကို ကာကွယ်တဲ့အနေနဲ. campaign ရဲ. scope တို. ၊ limit of the campaign တို. method to follow တို. စသည်ဖြင့် သေချာသတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းပြီးမှ အဲဒီကန်ပိန်းကို ဆင်နွှဲစေခဲ့ရသဗျ ။ အဲလိုမှ သတ်မှတ်မထားရင် ဆရာတွေက အလွန်အကျွံတွေလုပ်ကြတော့မှာကိုး။ ထားတော့။ အခုတော့ အားလုံးမြင်တဲ့အတိုင်းပဲ….တရုတ်ပြည်ကြီးအင်အားကြီးလာပြီမဟုတ်လား ။
ဒါနဲ.စပ်ဆက်ပြီးကျွန်တော်တွေးမိတာက ကျွန်တော်တို.ရဲ.ရွှေပြည်ကြီးပဲဗျ။ သိတဲ့အတိုင်းပဲဗျာ….။ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရေးပဲခေါ်ခေါ် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးပဲခေါ်ခေါ်……အဲဒါတွေကို အကောင်အထည်ဖော်တဲ့အခါတိုင်းမှာ အတွေးအခေါ်အဟောင်းသမားတွေနဲ. အတွေးအခေါ်အသစ်သမားတွေ ထိပ်တိုက်တွေ.ကြတာ အစဉ်အလာလိုဖြစ်နေပါပြီ ။ အဟောင်းကနေ အသစ်ကိုပြောင်းတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကို လုပ်ရတာကလည်း တော်တော်သိမ်မွေ.တယ်မလား ။ အခန်.မသင့်လို. လွဲချော်သွားရင် ပိုပြီးဆိုးသွားနိုင်တဲ့အနေအထားတွေကလည်း ရှိသေးတယ်။ ဥပမာ- ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုကြီး ပြိုကွဲသွားသလိုမျိုးတွေပေါ့ ။
အခုလည်း ရွှေပြည်ကြီးမှာလောလောဆယ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အခြေအနေအရပ်ရပ်မှာ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရေးသမားတွေ အင်အားမနည်းပါစေနဲ. ၊ ရှေးရိုးစွဲသမားတွေ လွှမ်းမိုးမလာပါစေနဲ.လို. ဆုတောင်းမိပါတယ်ဗျာ ။
ချစ်ကြည်အေး November 15, 2011 at 1:59 PM
ဆရာကေ အသေအချာဖတ်ဖို့ ပရင့်ထုတ်သွားတယ်ရှင့်...:)
KZကေ November 15, 2011 at 11:12 PM
မြန်မြန်ဆန်ဆန်ဖွံ့ဖြိုးလာတဲ့ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရေးမှာအမျိုးသားရေးဟာ တစိတ်တပိုင်းအနေနဲ့ပါဝင်လာခဲ့တယ်။
ဆိုတာတွေကြောင့် ဒီအခန်းကို လက်ရှိကျနော်တို့နဲ့များနီးစပ်မလားဆိုပြီး ရေးခဲ့ပါတယ်။
သို့သော် ငြိမ်းချမ်းရေး မရှိရင် ဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူး။
Maribel Artaste June 29, 2012 at 5:34 PM